Matrix Signature Courses from Smart Learning Class
Matrix ရဲ့ Lead Instructor နဲ့ Finance Program Advisor ဖြစ်သော ဆရာမ Dr. Hla Theingi ကိုယ်တိုင် Online က နေတဆင့် စာတွေ့လက်တွေ့များ ပေါင်းဆက်ကာ Two Way Communication ရရန်အတွက် Conferencing method ဖြင့် သင်ကြားပို့ချသွားမည့် Matrix ရဲ့ Siganture Courses တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ 🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽 1️⃣Financial Performance Techniques 🧐 - လုပ်ငန်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းရှင်းတမ်းများကို အသုံးပြုပြီး Financial Statement Analysis ပြုလုပ်ပုံများ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆုံးဖ
“Never Stop Learning: for when we stop learning we stop growing "
Covid 19 ကို အိမ်မှာလုံခြုံစွာ နေခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ရင်း Covid19 အလွန်ကာလအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိင်ရန်အတွက် Matrix Institute of Professionals မှ Professional Development သင်တန်းများ၊ လုပ်ငန်းများအတွက် မိမိလုပ်ငန်းအခြေအနေများကို သုံးသပ်ပြင်ဆင်နိုင်မည့််သင်တန်းများကို အိမ်ကနေ အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်တဲ့ Smart Learning Classes များနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ - Smart Learning Class ဆိုတာ 💯💯 Matrix မှာ ပင်တိုင်သင်ကြားနေတဲ့ Lead Instructor များ ကိုယ်တိုင် Online က နေတဆင့် စာ တွေ့လက်တွေ့များ
🔹 🔹 🔹 Corporate Finance Essentials 🔹 🔹 🔹
🔁 💵 💴 💶 💷 Corporate Finance ပညာရပ်ဟာ ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာတဲ့ Corporate Environment မှာ ပိုပြီး ခေတ်စားလာတဲ့ Topics တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတိုင်းဟာ လုပ်ငန်းတွေ ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်ဖို့ Budgeting တည်ဆောက်မှု၊ ဆက်လက်ပြီး ကြီးထွားဖို့ အတွက် New Investment, New Project တွေကို Capital Budgeting ကောင်းစွာတည်ဆောက် နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်... - ဒါတင်မကသေးဘဲ ဆက်လက် တိုးချဲ့ဖို့ Capital Structure ကို တည်ဆောက်ခြင်း (Debt vs. Equity Financing) ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ Coprorate Fin
Just Stay Home & Learn !
NIKE Company နဲ့ အမှန်ခြစ် Swoosh☑️ အမှတ်အသားတွေဆိုရင် လူအများနဲ့ မစိမ်းပါဘူး။ - အားကစား အဝတ်အစားနဲ့ ဖိနပ်ပေါင်းစုံကို ရောင်းချနေတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ကုမ္ပဏီဟာ လက်ရှိ အချိန်မှာ ဘီလျံများစွာ တန်နေပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ အစပိုင်း လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မှုပိုင်းလေးကို Corporate Finance အသုံးချခဲ့ပုံလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။😊😊😊 - ၁၉၆၀ နှောင်းပိုင်း နဲ့ ၁၉၇၀ တောက်လျှောက်ဟာ Nike Company ရဲ့ Defining Moments တွေ ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ကာလတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး Make or Break Mentality ကို ထားပြီး Aggressive Expansion
“Never Stop Learning: for when we stop learning we stop growing.” - သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်မှာ အလုပ်ကနေ အနားယူရင် ကိုယ်ရဲ့ အချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိနဲ့ Professional Development ပြုလုပ်ဖို့ Matrix Institute of Professionals ရဲ့ April လမှာ ဖွင့်လှစ်မယ့် အိမ်ကနေ အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်တဲ့ Smart Learning Classes များနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်🤩🤩🤩 - 💯 💯 Smart Learning Class ဆိုတာ💯 💯 Matrix မှာ ပင်တိုင်သင်ကြားနေတဲ့ Lead Instructor များ ကိုယ်တိုင် Online က နေတဆင့် စာ တွေ့လက်တွေ့များ ပ
Smart Learning Class!
"Hard times are sometimes blessings in disguise. We do have to suffer but in the end it makes us strong, better and wise. " - ~Anurag Prakash Ray - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး မှာ ကျရောက်နေတဲ့ COVID-19 ရောဂါဆိုးကြီးကြောင့် အခုအချိန်မှာ လူ့အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးနေရသလို နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ အလုပ်အကိုင်ကြပ်တည်း ခြင်းနဲ့ စီးပွားရေး ကျဆင်းခြင်း စတဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို စတင်ခံစားနေရပြီးဖြစ်ပါတယ်… - အခုလက်ရှိရင်ဆိုင် ကြုံတွေနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ အတွက် သေသေချာချာ ပြင်ဆင